हामी खेल्दा फ्रेन्चाइज प्रतियाेगिता हुन्छन भन्ने कल्पनामा नै थिएन- विनाेद दाश (भिडियाे) | Neplays.com
हामी खेल्दा फ्रेन्चाइज प्रतियाेगिता हुन्छन भन्ने कल्पनामा नै थिएन- विनाेद दाश (भिडियाे)
धनगढी प्रिमियर लिग साेमबारबाट सुरू हुँदैछ । पहिलाे पटक पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक विनाेद दाश डीपीएलकाे प्रतियाेगिता निर्देशक बनेका छन । याे प्रतियाेगितालाइ सफल पार्न उनीमाथि पनि दबाव छ । खेलाडीका हिसावले सफल रहेपनि प्रतियाेगिता अायाेजनाकाे निर्देशक बन्दाकाे फरकका बारेमा विनाेदले नेप्लेजसँग गरेकाे कुराकानीः
व्यवस्थापकीय तयारी कस्तो भैराखको छ ?
ग्राउण्ड शुरुको दुई दिन विग्रिएको थियो । यदि भोलि मौसम राम्रो भयो भने उद्घाटन खेल समयमै शुरु गर्छौं । भोलि यदि हुस्सु लाग्यो भने आधि घण्टा जति ढिला पनि हुन सक्छ । त्यसबाहेक अरुकुनै समस्या छैन । मैदान राम्रो अवस्थामा छ । दुईदिनको पानीले हामीलाई अलिकति ‘डिस्टर्व’ गर्यो । जसले गर्दा हामी सेड्यूएल अनुसार चल्न सकेनौं । त्यसैले २ दिन खेललाई पर सारिएकाले केही समय पायौं, हामीले तयारी गर्नका लागि । अहिले पनि हामीले आउट फिल्डमा रोलिङ गरिरहेका छौं । अहिले पनि खेल्न मिल्ने अवस्थामा मैदान छ तर अझैंं राम्रो वनाउने प्रयासमा छौं ।
तपाईको समय र अहिलेको समयमा क्रिकेटमा धेरै चेन्ज आएको छ कस्तो लाग्छ ?
रिजल्टले सबै कुरालाई ठिक पार्छ । तीन चार वर्षमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाएको सफलता जुन छ त्यसैको फलस्वरुप यस्ता प्रतियोगिताहरु आयोजना हुन लागेका छन् । जुन समयमा भारतमा आईपीएल सुरु भयो त्यसले पनि विश्व क्रिकेटमा एउटा छुट्टै माहोल बनायो र त्यो माहोलमा नेपाल पनि सामेल हुन पुग्यो । एसपीए कपबाट डीपीएल, इपिएल, पीपीएल प्रतियोगिताहरु भए । कर्मसियल एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने यो एउटा ठूलो जम्प चाहीँ हो । त्यसले गर्दा क्रिकेटको छुट्टै माहोला श्रृजना गरेको छ । यसले क्रिकेटको विकासमा खासै सफलता नदिए पनि यसले स्किल विकासमा महत्वपूर्ण सफलता दिलाउँछ ।
अहिलेको समयमा नेपाली क्रिकेट राम्रो फर्ममा रहेको छ । अलि चाँडै जन्मिएको जस्तो लाग्दैन ?
हैन, हामी जहाँबाट क्रिकेट शुरु गरेका थियौं । जति सक्दो राम्रो गर्यौं । अहिले आएको त्यसको श्रेय हामीले पनि पाइरहेका छौं । नयाँ खेलाडीहरु यसका हकदार पनि छन् । अहिले खेल्ने उमेर भएको भए यति धेरै प्रतिस्पर्धामा म त्यसै हराउने थिए की । तर एउटा कुरा भन्नै पर्छ, अहिलेका क्रिकेटरहरु हामी भन्दा पक्कै पनि भाग्यमानी हुन् ।
तपाइले खेलेको क्रिकेट र तपाई म्यानेजर भएपछिको क्रिकेट कस्तो फरक छ ?
फरक छ । मैले भने नी अहिलेको क्रिकेटको समस्या भनेको पूर्वाधारको अभाव हो । वितेको तीन चार वर्षमा जति पनि उपलव्धीहरु पायौं त्यसलाई वेश बनाएर हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको भए, एकेडेमीहरु निर्माण गर्न लागेको भए, घरेलु लिग गर्न शुरु गरेको भए अहिलेको भन्दा अझै राम्रो अवस्थामा हुने थियौं । तर अझै ढिला भइसकेको छैन, पछिल्ला वर्षहरुमा भइरहेको लिगहरुले खेलाडीलाई आर्थिक अवस्थमा सवल बनाउन मद्दत गरेका छन् । यो सम्पूर्ण नभएपनि केही हदसम्म खेलाडीलाई राम्रो गरेको छ ।
कति चेन्ज छ क्रिकेट ?
स्किलवाईज कुरा गर्दा त्यति भास्ट डिफरेन्स छैन । तर अहिलेका खेलाडीहरु क्षमताका हिसाबमा उत्कृष्ट छन् । अहिलेको चेन्ज भनेको नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि धेरै अवसरहरु छन् त्यो हाम्रो पालोमा थिएन । अहिलेको जस्तो एक्सपोजर हाम्रो पालोमा धेरै कम खेलाडीले मात्र पाउथे । त्यसमध्य म एक्सपोजर पाउने खेलाडीमध्ये थिए । अहिले जति एक्सपोजर पाइराखेका छन् क्रिकेटरले यसका साथै व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सक्यौं भने अझै राम्रो गर्न सक्छौं ।
डीपीएलको प्रतियोगिता निर्देशक हुनुहुन्छ कत्तिको चुनौती अनुभव गर्नुभएको छ ?
म क्रिकेटका हरेक फरम्याटमा इन्ज्वाए गर्छु । खेलाडी, कप्तान, प्रशिक्षक जुन कुनै भूमिकामा । ५–६ वर्ष कप्तान भए त्यति बेला पनि राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि राम्रो गरे । अहिलेको भूमिका पनि सफलता पूर्वक निर्वाह गर्न सक्षम छु । र गर्छु पनि ।
अमेरिकामा पाकिस्तानी क्रिकेटको चर्चा के भने त इमरानले?
ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोटमा मलेसियाले कुवेतलाई हरायो